Secrets ubuhle ababhinqileyo kunye nempilo
Ndingalufumana ukufikelela ulonwabo nempumelelo? Abantu bohlulwa ngokweendidi ezimbini zabantu. Udidi lokuqala luquka abo, ngubani ovuyayo rhoqo engamkholosi kunye naye, siphumelele ebomini lobuqu, nasemsebenzini. Kodwa kudidi lwesibini abo, abongamela kudidi lokuqala kwaye ufuna ukwenza isicelo kudidi lokuqala. Ukubona, ngamnye kuthi ukuba amaxesha, xa sikwazi iimbasa eyenza ikufanele, kodwa nokuba ngenxa yokuthobeka, nokuba shi kule ngenxa yokoyika.
more: imithambo Self-ukuzithemba!
Umntu ngamnye ngamaxesha ukudinwa isoloko amaphupho umphefumlo, ngayo, njengoko imijelo ukukhanya yamanzi iya kuqhutywa nge umzimba, ngokuhlamba kuphela ukudinwa, kodwa zonke iimvakalelo ezingakhiyo iminqweno yemini. kwaye, ngempela, imiphefumlo kakhulu elula i "igqirha" anti-uxinezeleko, kwaye ukuba efanayo kulunyusa nesiphumo kwiimeko ezininzi ixesha? Emva koko ke kuvela imiphefumulo eziphezulu, onako ukunika mood ogqibeleleyo, makakwenze, apholise umzimba, zagcina, balahle ukukhathala.
more: hlambi ngaphezulu
yokukhathalela umzimba ehlotyeni
umzimba Summer ufakwa iimvavanyo ezimbini: imitha yelanga solar lobushushu eliphezulu. Ukukhusela kumaza, kufuneka ukuba siqwalasele ngenyameko ukukhetha indlela zokuzikhusela, kwakunye ukunciphisa ixesha elichithwa elangeni, kungekho ngaphezulu 1,5-2 iiyure ngosuku.
Uphantsi kwenkathalo umzimba ehlotyeni, lalela, libuza. Ukuba ulusu kuyaqala ukukhula umxhesho ontlakantlaka, ke isicelo tshitshilili, ukuba isikhumba owomileyo, amanzi ezinqinileyo. yokukhathalela umzimba ehlotyeni kufuneka olunzulu ngokuqhubekayo.
more: yokukhathalela umzimba ehlotyeni
Esikhumbeni kufuneka kwamkeleka iliso, kwaye kuya kufuneka ukuba asebenze nzima. Ngapha koko, ulusu esempilweni kuxhomekeke njalo ku, sithini isixa semali ozihlawule ukuba izithambiso, zokuzilungisa kunye nezinye izibonelelo ngisho ukunakekela eyiyo. Ubukhulu becala kuxhomekeke amandla akho, yokuphila, uqhuba. Yiloo nto kufuneka ukwazi, ukuba ufuna ukuzibandakanya ngokupheleleyo impilo yabo isikhumba.
more: Body Care Skin
iimveliso yokukhathalela umzimba
Umntu ngamnye kuthi uhlobo wamnika iqhezu yobuhle bayo. Umntu wavuka obukhulu kangaka, nokuba ngubani – i amashiya ubude enjalo, ukuba akukho inki akufuneki okanye izikhonkwane ukususela ekuzalweni womelele kwaye usempilweni. Kodwa kukho, lowo inkangeleko yakho akayithandi, apha, bathi, unwele, nomsila mouse. Kodwa oku kungenziwa. Ubuhle lakho lwangaphandle, kunye nentando yangaphakathi, Kuxhomekeka kwindlela oliqonda ngayo.
more: iimveliso yokukhathalela umzimba
page 1 ukusuka 2
Amanqaku ngaphezulu ...
Zokuthambisa for Khathalela umzimba